အရောင် sorter စက်ထုတ်လုပ်သူ,ဆန်အရောင် sorter စက်စျေးနှုန်း
1.၎င်း၏ modular ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, အရောင် sorter စက်အကွာအဝေးမျိုးစုံစွမ်းရည်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်. ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်သေးငယ်သည့်သုတ်သင်နမူနာများကိုအသုံးပြုရန် module တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, အဖြစ်အနိမ့်ကနေ 500 အထိကီလိုဂရမ် / နာရီ 20 တစ်နာရီတန်ချိန်.
2.optical sorter ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်, အမျိုးမျိုးသောဆန်အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားရန်စီစဉ်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အကြီးအကျယ်မြင်သာသောချို့ယွင်းချက်များကိုလည်းငြင်းပယ်နိုင်သည်, သိမ်မွေ့သော - မြင်နိုင်ချို့ယွင်းချက်, နှင့်တူညီသော - အရောင်ချို့ယွင်းချက်.
Rice sorter စက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
VTXM စီးရီးအရောင်စစ်ဆေးစက်သည် pixel linear array CCD light ကိုထုတ်လုပ်သောကမ္ဘာ့အဆင့်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်သည်, လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ။ အရောင်ခွဲခြင်းစက်တွင်အသက်ရှည်ရှည်တပ်ဆင်ထားသည်, မြန်နှုန်းမြင့် solenoid အဆို့ရှင်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု,တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်. ဆန်ခွဲစက်သည်ထုတ်ကုန်အရောင်ရွေးချယ်မှုအတွက်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်, အထူးသဖြင့်အပြီးသတ်ဆန်၌သေးငယ်သောအနာနှင့်စပါးအသားအရေအမှုန်ငယ်များပါ ၀ င်သောဆန်အတွက်အထူးသဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်၏ပြားချပ်ချပ်,အရောင်ခွဲခြင်းစက်သည်အရောင်ရွေးချယ်ရာတွင်ပိုမိုကြီးမားသောအမှုန်များအတွက်သင့်တော်သည်.
အရောင် sorter စက်၏လျှောက်လွှာ
ဆန်, ဂျုံ, ပြောင်း, ပဲပုပ်, မြေပဲ, နေကြာစေ့, သစ်ပင်, ဗာဒံသီး, တောင်အမေရိကားမှထွက်သောချက်စားလို့ရသည့်အစေ့တစ်မျိုး, ဆားငန်, medlar, pistachio, ကျောက်ကပ်, ငရုတ်သီး, ပဲနီ, အခြားသူများ.
လင်းကျောက်ကျောက်, လင်းကျောက်သဲ, ပိုတက်စီယမ်ကွင်းဆင်း, Barite, calcite, ထုံးကျောက်, ပုလဲ, စကျင်ကျောက်နှင့်အခြားသူများ.
စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်, ပလပ်စတစ်လုံးလေး, ပလတ်စတစ်အပိုင်းပိုင်း, ပလတ်စတစ် granules, ပလပ်စတစ်ပုလင်းထုပ်အလွှာ, PET ပုလင်းအပိုင်းအစ, ABS ပလပ်စတစ်အလွှာ, PP ပလပ်စတစ်အပိုင်းအစ, ပြန်လည်အသုံးပြုပလပ်စတစ်, အခြားသူများ.
ပစ္စည်းများကိုအရောင် sorter စက်၏ In-feed Hopper ထဲသို့ထည့်ပါ,၎င်းသည်တုန်ခါနေသောပြားတစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေသောတောင်ထိပ်သို့စီးဆင်းသည်အထိရွေ့လျားသည်, ၃၆၀ ဒီဂရီတွင်တစ် ဦး ချင်းစစ်ဆေးပြီး RGB ဖြင့်အမျိုးအစားခွဲထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အပြည့်အ ၀ ရောင်စုံကင်မရာများ။ optical device မှရရှိသောအချက်ပြမှုအပေါ်မူတည်သည်။, အရောင် sorting စက်ရဲ့ software ကို pneumatic device ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်, အရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာသူမြားထဲကမလိုချင်တဲ့ထုတ်ကုန်ခွဲခြား, အရာသဘာဝကသူတို့ရဲ့ဆေးရုံကဆင်း Hopper ရောက်ရှိဖို့. ပယ်ချထားသောထုတ်ကုန်များကိုအစားထိုးသောထုတ်လွှတ်မှုမှထုတ်လုပ်သောလေဖိအားတစ်ခုမှသွေဖည်သွားပြီးရှေ့ဘက် Hopper တွင်စွန့်ပစ်သည်။. အလိုအလျောက်အပန်းဖြေဗားရှင်း၌တည်၏, တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံရန်ဆန်ခွဲရန်စက်၏အခြားအပိုင်းသို့ပို့ရန်ခွဲထားသည့်သို့မဟုတ်ပယ်ချထားသောထုတ်ကုန်ကို.
အရောင် sorter စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည်
ဆန် sorter စက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ